August 2013 ~ Htet Aung Kyaw
12:39 AM Htet Aung Kyaw No comments
Taninthari No 12 -Edited by Htet Aung Kyaw
" မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နော်ဝေ ရွေးကောက်ပွဲ လာရောက်လေ့လာမည်''
11:34 PM Htet Aung Kyaw No comments
စက်တင်ဘာလ၇-ရက်နေ့ မှာ နော်ဝေ-ဘားမားကော်မတီမှ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရောက်ရှိလာမဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့ အစည်းများကို တွေ့ ဆုံပါမယ်။ ဒီမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဟာ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း နော်ဝေနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း လေ့လာရန်၊သုတေသနပညာရှင်များ၊အင်စတီကျူးရှင်းများ၊ နော်ဝေအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်တွေ့ ဆုံရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်အတွင်း နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့ဘရဂန်မြို့ နဲ့ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့ တို့ မှာ နိုင်ငံရေးသမားများ- ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ- အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ တွေ့ ဆုံမဲ့ အစည်းအဝေးများ စီစဉ်ပါရှိပါတယ်။ ဒီမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဟာ အော်စလိုမြို့ မှာ စက်တင်ဘာလ ၇-ရက်နေ့ မှ ၁၄-ရက်နေ့ အထိ နေထိုင်ပါမယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၄-ရက်နေ့ မှ စက်တင်ဘာလ ၁၇-ရက်နေ့ အထိ ဘရဂန်မြို့ ကို သွားရောက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် စက်တင်ဘာလ ၁၇-ရက်နေ့ ကနေ ၂၁-ရက်နေ့ မှာတော့ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့ ကို သွားရောက်မှာပါ။
ဒီမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မှာ ဖိတ်ကြားခံရသူတွေကတော့ ၈၈-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ မှ ကိုထွန်းမြင့်အောင်၊ ကိုအံဘွယ်ကျော်၊ ကိုမြအေး၊ မမီမီလွင်၊ မစန်းစန်းမော်၊ ကိုဌေးဝင်းအောင် (ခ) ကိုပြုံးချို နဲ့ကိုစိုးထွန်းတို့ ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှ ဦးသိန်းဦး၊ ဦးစောလှိူင်နဲ့ကိုကိုဇော်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင့် မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီမှ ဒေါက်တာ မင်းစိုးလင်း၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီမှ Minn Wunn Gyi ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုဖုန်းပြည့်ကြွယ်တို့ ကိုလဲ ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိလိုတဲ့ မေးခွန်းများ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်… ကျေးဇူးပြုပြီး နော်ဝေ-ဘားမား ကော်မတီရဲ့ ရုံးဖုန်းနဲ့အီးမေးလ်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်း။ ။ ၉၁၅၇၆၂၅၁
နော်ဝေဘာသာနဲ့မူရင်းရေးသားချက်ကိုတော့ အောက်ပါလခ့်မှာ ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။
Burmesisk delegasjon til valget
Tips en venn • Utskriftsversjon Besøk • 23. august 2013
Lørdag 7. september mottar Den norske Burmakomité representanter fra ulike politiske partier og sentrale sivilsamfunnsaktører i Burma. Delegasjonen skal observere valget og møte en rekke forskere, institusjoner og organisasjoner.
Det legges opp til en rekke møter med institusjoner, organisasjoner, akademikere, politikere og valgobservasjon i Oslo, Bergen og Berlin. Delegasjonen vil besøke Oslo i tidsrommet 7. til 14. samt 17. september, Bergen fra 14. til 17. september og Berlin fra 17. til 21. september.
Fra 88 Generation Students er Htun Myint Aung, Ant Bwe Kyaw, Mya Aye, Me Me Lwin, San San Maw, Htay Win Aung (alias Pyone Cho, bildet) og Soe Htun invitert. Fra National League for Democracy (NLD) er U Thein Oo, U Saw Hlaing (Dago Township) og Ko Ko Zaw (NLD i Mon-staten) invitert. I tillegg er Dr. Min Soe Lin fra det politiske partiet Mon Democracy Party, Minn Wunna Gyi fra det politiske partiet All Mon Regional Democracy Party og Phone Piay Kywe fra studentorganisasjonen All Burma Federation of Student Unions invitert.
Har du spørsmål vedrørende delegasjonsbesøket vær vennlig å ta kontakt med informasjonsansvarlig i Den norske Burmakomité per telefon eller e-post.
Tlf: 915 76 251
မရီရီထွန်း - Facebook မှ ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
12:05 AM Htet Aung Kyaw 1 comment
ထက်အောင်ကျော်| August 18, 2013 | ဧရာဝတီ။
ဘုရားသုံးဆူဂိတ် (ဓာတ်ပုံ – ထက်အောင်ကျော်)
ရွှေတိဂုံစေတီတော်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာ လေယာဉ်ကွင်းဆီ ကျနော် ထွက်လာပါတယ်။ ကျနော်စီးဖူးသမျှ တက္ကစီသမား အားလုံး ဘာကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေမှန်းမသိပါ။ တချိန်လုံး မြည်တွန်တောက်တီးနေပြီး တွေ့သမျှကား၊ တွေ့သမျှလူတွေကို ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ခရီးသည်ကိုလည်း လမ်းကြုံလိုက်လာ သူလိုသဘောထားပြီး တက္ကစီမောင်းရင်း ဆေးလိပ်သောက်ချင်သောက်၊ ကွမ်းတံတွေး ထွေးချင်ထွေး လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
လေဆိပ် Check In ထဲရောက်ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာ လေယာဉ်ကွင်းတွေမှာလိုပဲ “တီတီ-တီတီ” မြည်တဲ့ စစ်ဆေးရေး ကိရိယာတွေနဲ့ အသေအချာ စစ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ Professional ဖြစ်မှုကို သိချင်တာနဲ့ ကွန်ပြူတာအိတ်ထဲက ရေပုလင်းကို မထုတ်ဘဲ ဒီအတိုင်း ထည့်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ခါးပတ်၊ အကြွေတွေကို ဘာမှမဖြုတ်ဘဲ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ဒီတိုင်းထားပြီး X-ray ကိုဖြတ်ပါတယ်။ စက်က “တီတီ-တီတီ” မြည်ပေမယ့် ၀န်ထမ်းတွေက ဘာမှ ပြန်မထုတ်ခိုင်းပါ။ ဘောင်းဘီအိတ်ကို လက်နဲ့စမ်းပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းလား။ ပိုက်ဆံအိတ်လားလို့ မေးပြီး ဒီအတိုင်းပဲ လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ကွန်ပြူတာအိတ်ထဲက ရေပုလင်း။
အရင် ထားဝယ်ဘက်သွားစဉ် လေယာဉ်စီးတုန်းကလည်း အလားတူ ကြုံခဲ့ရဖူးပေမယ့် ဒါဟာ ပြည်တွင်းမို့လို့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ လုပ်တာဖြစ်မယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ဆိုရင်တော့ အသေအချာ စစ်လောက်ပါတယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာပါ။
အခုတိုင်းဆိုရင်တော့ လေယာဉ်ကွင်း လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေက တာဝန်ကို သိပ်အလေးနက် ထားပုံမရ။ ဘန်ကောက်က သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်နဲ့ တခြားလေဆိပ်တွေမှာ ဒါမျိုးမရပါ။ မဲဆောက်လို နယ်စပ်က လေဆိပ်မှာတောင် ဒါမျိုးမရ။ ကျနော် ကွန်ပြူတာအိတ်ထဲက ရေပုလင်းကို မဲဆောက်မှာ ထုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်မှာဆိုရင် ရေပုလင်းမပြောနဲ့ သွားနှုတ်ထားလို့ ခံတွင်းရှင်းဖို့ ပေးလိုက်တဲ့ အရည်တောင် သယ်ခွင့်မပေး။ နောက်ဆုံး သူတို့ရှေ့မှာ ခံတွင်းကျင်းပြခိုင်းပြီးမှ ပြန်သယ်ခွင့်ပေးပါတယ်။
သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်မှာ ငွေလဲဖို့ မေ့ခဲ့လို့ နောက်နေ့ ဘန်ကောက်မြို့လယ်က ငွေလဲကောင်တာတခုမှာ မြန်မာငွေ လဲဖို့လုပ်တော့ သူတို့ ကောင်တာမှာ မြန်မာငွေ လဲပေးဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးဘူးဆိုတာ သိရပါတယ်။ ရှိတဲ့ နော်ဝေငွေနဲ့ လဲလှယ် ပြီးတော့ နယ်စပ်ကို ခရီးဆက်ဖို့ ပြင်ပါတယ်။
ဒီတကြိမ် ခရီးစဉ်က ၂၅ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်ဖြစ်သလို နယ်စပ်ဒေသရဲ့ နောက်ဆုံး ခရီးစဉ်လည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် နယ်စပ်ဒေသရှိ အဖွဲ့အစည်း အတော်များများက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလုပ်ပြီး ပြည်တွင်းကို ပြန်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့အတွက် နောက်တကြိမ် ကျနော် နယ်စပ် ပြန်ရောက်ရင် ဒီအဖွဲ့တွေက နယ်စပ်မှာ ဆက်ရှိ၊ မရှိ မသေချာတော့ပါ။ ဒါကြောင့် ဘန်ကောက်မှာ တည်းတာတောင် အရင်တည်းနေကျ သတင်းဌာနတွေရှိရာ မြို့လယ်မှာ မတည်းတော့ဘဲ တချိန်က ကျနော်တို့ ABSDF ကျောင်းသားတွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေ အကြာကြီးနေခဲ့ဖူးတဲ့ ဘန်းကပိဘက်က The Mall ကုန်တိုက်ကြီးနားမှာ သွားတည်းပါတယ်။ တချိန်က ကျနော်တို့ စီးခဲ့ဖူးတဲ့ ဘန်းကပိ-ပတူနန် မြောင်းပုတ်အတိုင်းပြေးတဲ့ စက်လှေကို အလွမ်းပြေစီးပါတယ်။
နောက်တနေ့ မနက်မှာတော့ နယ်စပ်ခရီးစဉ်အဖြစ် ဘန်ကောက်ကနေ စန်ခရပူရီကို ဆင်းပါတယ်။ စန်ခရပူရီ ရေအိုင်ကြီးက အတော် ခန်းခြောက်နေပြီး သစ်သား တံတားကြီးကိုလည်း ပြန်လည် ပြုပြင်ထားတာတွေ့ ရပါတယ်။ ဘုရားသုံးဆူ နယ်စပ်ဂိတ်ဆီ ရောက်ပေမယ့် မြန်မာဘက်ခြမ်းကို ကျနော် မ၀င်ရဲသေးပါ။ ဗီဇာ လျှောက်ပြီး ရန်ကုန်အထိ သွားရဲပေမယ့် နယ်စပ် ပြန်ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ စစ်သားတွေ၊ ရဲတွေကို မြင်ရင် အရင်လို ခပ်တန်းတန်း ဖြစ်နေတဲ့စိတ်က လျှော့ချလို့မရသေး။
အပြန်လမ်းပေါ်က စန်ခလယ်ရွာမှာ ခဏနားပြီး အမှတ်တရ ပစ္စည်း ၀ယ်ရင်းနဲ့ “အရင်ကျောင်းသား တပ်ရင်းနဲ့ မွန်ဗဟိုရှိတဲ့ နန်းမကိတ်ရွာက အခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ” လို့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတဦးကို မေးလိုက်ပါတယ် ထိုင်းလိုပြောနေတဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းဟာ ချက်ချင်း မွန်သံဝဲတဲ့ မြန်မာသံအဖြစ် ပြောင်းသွားပြီး “ဟိုရှေ့မှာ အစ်ကိုတို့ ဖြတ်လာတဲ့ တောချတောဂိတ်ဟာ ကျောင်းသားစခန်း နေရာပဲပေါ့” လို့ဖြေပါတယ်။ ပြီးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က ABSDF ကျောင်းသားစခန်းတွေ အကြောင်း၊ ဘုရားသုံးဆူ တိုက်ပွဲအကြောင်း တစွန်းတစ ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စန်ခရက အပြန်မှာတော့ ကျနော်တို့ ABSDF (၂၀၁) တပ်ရင်း တပ်ခွဲ (၂) စခန်း ထိုင်ခဲ့တဲ့ နတ်အိမ်တောင် စခန်းဆီ သွားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ ၀န်းကျင်က ဒီလမ်းကို လိုင်းကားစီးပြီး မကြာခဏ သွားဖူးခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ကျနော် ငှားလာတဲ့ ကားသမားက ဒီလောက် ကျဉ်းမြောင်းပြီး အကွေ့အကောက်များ၊ အတက်အဆင်း များလှတဲ့အပြင် လူသူမရှိတဲ့လမ်းကို သူမလိုက်ရဲဘူးလို့ ငြင်းနေတဲ့အတွက် ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။
တောင်တက်လမ်းဝမှာ ရှိတဲ့ ရဲစခန်းဆီမှာ ၀င်မေးပြီး ဒီလမ်းက လုံခြုံရေး စိတ်ချရပါတယ်ဆိုမှ သူက ဆက်မောင်းပါတယ်။ “နယ်စပ်ရောက်တာနဲ့ ငါ့ကို ရိုက်ပုတ်ပြီး ငါ့ကားကို မြန်မာနယ်ထဲ ယူသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” တဲ့။ ဒါက ကားသမားဘက်က စိုးရိမ်မှု။ သူကားကလည်း နောက်ဆုံးပေါ် ဖိုးဝှီးကားဆိုတော့ စိုးရိမ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က ဒါတွေကို မစဉ်းစားမိ။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာဆီရောက်ဖို့ တခုတည်းကိုသာ သိတဲ့လူ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အကွေ့အကောက်ကများ၊ မိုးကရွာ၊ တောင်ကပြို၊ သစ်တောကထူတဲ့ ကီလိုမီတာ ၃၀ ၀န်းကျင်ရှိ တောလမ်းကို ခဲရာခဲဆစ် ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် တချိန်က ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေ နေခဲ့ဖူးတဲ့ နတ်အိမ်တောင်ရွာဆီ ရောက်လာပါတယ်။ ရွာအလွန် ကျောက်ပုံ နယ်စပ်ဂိတ် တည့်တည့်ပေါ်မှာတော့ ရတနာ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဖြတ်ထားတဲ့ ၀၀၀ မှတ်တိုင်။ မှတ်တိုင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ အမှတ် (၂၀၈) တပ်ရင်း ဆိုင်းဘုတ်ကြီးနဲ့ လုံခြုံရေး စစ်သားတွေ။ မှတ်တိုင်ရဲ့ ယာဘက်မှာတော့ “ထိုင်းနှင့်မြန်မာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ချစ်ကြည်စွာ နေထိုင်ကြမည်” လို့ ရေးထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီး တခု။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ၀န်းကျင်။ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလကနေ ၁၉၉၁ ဒီဇင်ဘာအထိ ဒီဒေသဟာ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ KNU စခန်းနေရာတွေပေါ့။ အခု တပ်ရင်း (၂၀၈) ထိုင်ထားတဲ့ နေရာဟာ ABSDF (၂၀၁) တပ်ရင်း တပ်ခွဲ (၂) ထိုင်တဲ့ “ကျောင်းသားကုန်း” ပေါ့။ ၁၉၉၁ နှောင်းပိုင်းမှာ ဒီဒေသကို န၀တ က ထိုးစစ်ဆင် သိမ်းပိုက်ပြီး ရတနာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလေ။ ချစ်ကြည်ရေး ဆိုင်းဘုတ်နောက်က တောင်ကုန်းပေါ် တက်လိုက်တော့ အလံတိုင်းကုန်းကို တွေ့ရပြီး မြန်မာ-ထိုင်း အလံနှစ်ခုကို ယှဉ်ပြိုင် လွှင့်ထူထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ အလံတိုင်းကုန်းပေါ်ကနေ မြန်မာဘက်ကို ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် တိုတယ်ကုမ္ပဏီရုံးခန်းနဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း။ ပြီးတော့ နတ်အိတ်တောင်ကနေ ကန်ကောက် အထိ ဖောက်ထားတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနဲ့ မြေနီလမ်းကြောင်းကြီးကို လှမ်းမြင်နေရပါတယ်။
မြန်မာဘက်ကို ၀င်လည်လို့ ရတယ်ဆိုပေမယ့် ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်အထိ သွားရဲတဲ့ကျနော်ဟာ နယ်စပ်က စစ်သားတွေကိုတွေ့ရင် အရင်သူပုန်စိတ်ခံက မပျောက်သေးတဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာ စိုးရိမ်မှုက ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အရင်ခရီးစဉ်တွေ တုန်းကလိုပဲ လိုအပ်တာတွေကို ခပ်မြန်မြန်ကြည့်၊ ခပ်မြန်မြန်ရိုက်ယူပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်အတွင်း ကိစ္စပြီးအောင် ကြိုးစားရပါတယ်။ တိုတယ်ကုမ္ပဏီနဲ့ တခြားဆိုင်းဘုတ်တွေကို အသေအချာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရဲပေမယ့် မြန်မာစစ်စခန်းတွေ၊ စစ်သားတွေကို ဓာတ်ပုံချိန် ရိုက်ဖို့တော့ တွန့်ဆုတ်နေဆဲ။ သူတို့ရဲ့ အမေးအမြန်းခံရမှာကို စိုးရိမ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နတ်အိမ်တောင်ရွာထဲ ခဏ၀င်ပြီး တချိန်က ကျနော်တို့ နေခဲ့ဖူးတဲ့အိမ်တွေ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေကို လိုက်နှုတ်ဆက်ဖို့ ပြင်ပေမယ့် ကျနော်နဲ့သိသူ သိပ်မရှိတော့ပါ။
နတ်အိမ်တောင်ကအပြန် နောက်တရက်မှာတော့ ထားဝယ် ခရီးစဉ်တုန်းက သွားခွင့်မကြုံလိုက်တဲ့ ကန်ချနပူရီ-ထားဝယ် ကားလမ်းပေါ်က ထီးခီးစခန်းကိုဝင်ဖို့ ကျနော် ကြိုးစားပါတယ်။ ကန်ချနပူရီနဲ့ ဘန်းကောင် (ရွာဟောင်း) အထိ အရင် လမ်းဟောင်းအတိုင်း နည်းနည်း ပြုပြင်ထားတာကိုသာ မြင်ရပေမယ့် ဘန်းကောင်နဲ့ ဖုနန်းလွန့် (နယ်စပ်ရှိ ထိုင်းဖက်ကမ်းက နောက်ဆုံးရွာ) ရွာအကြား ကားလမ်းကိုတော့ လုံးဝ တိုးချဲ့ပြီး အသစ်ပြုပြင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖုနန်းလွန်ရွာထိပ်၊ အရင်က ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေ တောထဲကနေ ထွက်လာပြီး ကန်ချနပူရီသွားဖို့ ညအိပ် ဘတ်စကားစောင့်ရတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့က မြေနီလမ်းဟာ အခု တကယ့် ဧရာမ ကတ္တရာလမ်းကြီး ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီလမ်းပေါ်မှာ အဖြူ-အနီ ဆေးသုတ်ထားပြီး သံပိုက်လုံးနဲ့ ပိတ်ထားတဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေးဂိတ်။ ဂိတ်ဘေးမှာတော့ အကောက်ခွန်ဌာနနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန။ လမ်းရဲ့ ဟိုဖက်ခြမ်းမှာတော့ တောချတောခေါ် နယ်ခြားစောင့် တပ်စခန်းတခု။ အဲဒီစခန်းတွေမှာ ကိုယ်ရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ပြပြီးရင် ရှေ့ဘက် ၅ ကီလိုခန့် အကွာရှိ မြန်မာနယ်စပ် ထီးခီးအထိ သွားခွင့်ပေးပါတယ်။ ၅ ကီလိုမှာ ၄ ကီလိုကိုပဲ ကတ္တရာခင်းထားပြီး ကျန်တကီလိုကိုတော့ မြေနီလမ်း လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီမြေနီလမ်းအတိုင်း ကားမောင်းဝင်လာတော့ အရင်က KNU ရဲဘော်တွေ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေကို ခဏခဏ တားပြီး စစ်တဲ့ဂိတ်နေရာဟာ အခုတော့ ထိုင်းစစ်သားတွေ ထိုင်နေတဲ့ဂိတ် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီဂိတ်ကိုကျော်ပြီး ၀င်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ ထိုင်းနယ်မြေကိုကျော်ပြီး မြန်မာပိုင်နက်ထဲ ရောက်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုင်းဘက်က ကားတွေ ၀င်ခွင့်မရှိတော့ပါ။ ကားကိုဂိတ်မှာထား၊ ၁၀ မိနစ်လောက် လှမ်းလျှောက် ၀င်သွားတော့ ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ နယ်စပ်ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ကားကို လက်ယာဘက် ကပ်မောင်းပါဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ထိုင်းဘက်မှာ လက်ဝဲကပ်ပြီး မြန်မာဘက်မှာ လက်ယာ ကပ်မောင်းဖို့ သတိပေးထားတာပါ။ ထိုင်းဖက်က ၀င်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ နောက်ဆုံး သွားလို့ရတဲ့နေရာမှာ ဓာတ်ဆီဆိုင် အသေးစားတခုနဲ့ တိုလီမိုလီရောင်းတဲ့ ဆိုင်တခုရှိပြီး အဲဒီဆိုင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တောင်ကုန်း ပေါ်မှာတော့ ဆောက်လုပ်ဆဲ မြန်မာ စစ်တပ်စခန်းတခုကို လှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ တောင်ခြေရင်းက မင်းသမီး ချောင်းဖျားမှာတော့ အီတလီ-ထိုင်း ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ ယာယီအိမ်ယာတချို့။ အဲဒါတွေကိုကျော်ပြီး မြန်မာနယ်ထဲ ၀င်မယ်ဆိုရင် သီးခြားခွင့်ပြုချက် တောင်းဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ဒေသခံဆိုရင်တော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဒီတိုင်း သွားလို့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တချိန်က ဒေသခံဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး ဒီအရပ်မှာ ၁၀ နှစ်ကျော် နေခဲ့ဖူးတဲ့ ကျနော်ဟာ အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားလည်း မဟုတ်၊ ဒေသခံအဖြစ်လည်း စာရင်းမပေါက်တော့တဲ့ အတွက် ဒီနေရာကိုကျော်ပြီး ရှေ့တိုးခွင့် မရှိပါ။ ကျနော်တို့ ABSDF ရဲဘော်တွေရဲ့ အာဇာနည်ကုန်းရှိရာ နောက်ထပ် နာရီဝက်လောက် ကားထပ်မောင်းရင် ရောက်နိုင်တဲ့ အမရာ (မင်းသမီးစခန်း) စခန်းဆီ သွားခွင့်မရဘဲ ပြန်လှည့်လာခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ (နောက်ဆုံး သတင်းတွေအရ ထီးခီး နယ်စပ်ဂိတ်ကို ထိုင်းဘက်ကပါ ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ထားဝယ်ကနေ ထီးခီးအထိ မြန်မာလိုင်းကားတွေ ပြေးနေပါတယ်။ ထီးခီး-ဖုနန်လွန် ကနေ မဟာချိုင်အထိ ထိုင်းဘက်က လိုင်းကား တွေပြေးနေပြီလို့ သိရပါတယ်)
ထီးခီး၊ အမရာ၊ ထီးထာ၊ အမို စသဖြင့် ဒီဒေသတလျှောက်ကို ၁၉၉၇ မှာ လက်လွတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ABSDF (၂၀၁) တပ်ရင်းနဲ့ (၂၀၃) က ကျောင်းသား အတော်များများ တတိယနိုင်ငံတွေဆီ ရောက်သွားကြပြီ ဖြစ်ပေမယ့် မဟာမိတ် KNU တွေကတော့ ဒီစခန်းတွေရဲ့ အောက်ဖက် မယ်ဖျာခီးနဲ့ ရတ်ချပူရီနယ်စပ် တလျှောက်မှာ အခိုင်မာ တပ်စခန်းတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့တွေ့နိုင်ဖို့ ဖုနန်းလွန်ကနေ နယ်စပ် လမ်းတလျှောက်ကိုဖြတ်ပြီး ရတ်ချပူရီခရိုင်ထဲက စ၀မ်ဖီးမြို့နယ်ထဲ ကျနော်ရောက်လာပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်က မြေနီလမ်းအဆင့်သာ ရှိသေးတဲ့ ဒီနယ်စပ်လမ်း တလျှောက်ဟာ အခုတော့ ကတ္တရာလမ်း အကောင်းစား ဖြစ်နေပါပြီ။ တချိန်က သေနတ်သံတွေ ကြားနေရတဲ့ ဒီလမ်းတလျှောက်ဟာ အခု တော့ အေးချမ်းငြိမ်သက်နေပြီး ဥယျာဉ်ခြံတွေ၊ အပန်းဖြေစခန်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လို့။
လူဦးရေ ၈၀၀၀ ၀န်းကျင် ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ထန်းဟင် ဒုက္ခသည် စခန်းဆီ မ၀င်ခင် တဂိုလမ်းရွာထိပ်က စားသောက်ဆိုင်မှာ နေ့လည်စာစားတော့ ချေသားနဲ့ တောဝက်သား အပါအ၀င် တောကောင်းသားတွေ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တဖက်က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးနဲ့ သစ်တော ထိမ်းသိမ်းရေး အကြောင်း ပြောနေပေမယ့် တဖက်ကလည်း လတ်ဆတ်တဲ့ တောကောင်အသားတွေ့ရင် မစားဘဲ မနေနိုင်။ တဂိုလမ်းကနေ ထန်ဟင်းစခန်းထဲ ရောက်တော့ ညနေ ၄ နာရီ ကျော်နေပြီ။ “ဓာတ်ပုံ မရိုက်ဘူးလို့ အာမခံချက်ပေးရင် စခန်းဝအထိ ၀င်ခွင့်ပေးမယ်” လို့ အောဆော်လို့ ခေါ်တဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းစောင့် ပြည့်သူစစ်အရာရှိက ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။
ကင်မရာကို အိတ်ထဲထည့်ပြီး စခန်းထဲဝင်လာတော့ စခန်းရှေ့က ဈေးတန်းအထိပဲ ကျနော့်ကို သွားခွင့်ပေးပြီး စမ်းချောင်းငယ်လေးတခု ခြားနေတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲ အထိတော့ ၀င်ခွင့်မပေးပါ။ အဲဒီထဲ ၀င်ချင်ရင် စ၀မ်ဖီးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီက လက်မှတ်ပါမှ ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခရီးကြုံတုန်း ခဏ၀င်လာ တဲ့ကျနော်က အဲဒါတွေကို ယူနေဖို့ အချိန်မရှိ။ ဒီတော့ စခန်းကော်မတီထဲက လူတယောက်ယောက်နဲ့ ညှိပြီးရင် ၀င်ခွင့်ရမယ်လို့ပဲ ထင်ထားခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် ပြဿနာက ဈေးဆိုင်တန်းအတွင်း စကားပြောကြည့် မိသလောက် လူတွေထဲမှာ ကျနော်ကိုသိသူ တဦးမှမရှိ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ် ၁၉၉၇ မင်းသမီးစခန်း ကျစဉ်က အတူတူ ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ လူအများစု တတိယနိုင်ငံ ထွက်ကုန်လို့ လူဟောင်းတွေ မရှိတော့ဘဲ နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ လူသစ်တွေက အများစု ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။
ကျနော်ကို သိမယ်လို့ လုံးဝထင်မထားတဲ့ ပုဂံမြို့က ဟိုတယ်မန်နေဂျာက ကျနော်ကို သိနေပြီး ကျနော့်ကို သိလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝ ယုံကြည်ထားတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းက လူတွေက ကျနော်ကို မသိဘူးဆိုတော့ အတော် စိတ်ညစ်သွားပါတယ်။ တကယ်က မသိရုံတင် မကပါဘူး။ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတဲ့ မြန်မာတဦးက သူတို့စခန်းထဲ ဘယ်လိုလုပ် ရောက်လာတာလဲ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် လာလည်တဲ့နေရာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီမြန်မာ ဘာလာလုပ်တာာလဲ၊ ဒီလူ မြန်မာသူလျှိုလား ဆိုပြီးတောင် သူတို့က သံသယ ၀င်လာလို့ မနည်း ရှင်းပြပြီး ပြန်ပြေးလာရပါတယ်။ ခက်တော့ ခက်သား။ KNU အပါဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အားလုံးနီးပါး သူတို့က ရန်သူလို့ ခေါ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးပြီး အဲဒီ အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနဲ့ ဖက်လဲတကင်း လုပ်နေချိန်မှာတောင် နယ်စပ်က ဒုက္ခသည် စခန်းတွင်းမှာတော့ မြန်မာတွေကို မယုံသေးဘဲ မြန်မာသူလျှိုလားဆိုပြီး သံသယတွေ အရင်အတိုင်း ရှိနေဆဲပါလား။
စ၀မ်ဖီးမြို့ပေါ် အရောက်မှာတော့ KNU တပ်မဟာ (၄) မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဒါးကျော်နဲ့ ကျနော် တွေ့ခွင့်ရပါတယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းက အခြေနေကို ပြောပြတော့ သူက တဟာားဟား ရယ်နေပြီး “ခင်ဗျားက ကျနော်ကိုမှ ကြိုမပြောတာ။ တကယ်ဆိုရင် လက်ရှိ စခန်းတာဝန်ခံက ခင်ဗျားရဲ့ မိတ်ဆွေကြီး ဘန်းချောင်းက ပဒိုလေ” လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ဘန်းချောင်းက ပဒို ဆိုတာကတော့ ၁၉၈၈ ကျနော်တို့ တောစခိုစဉ်က ကျောင်းသားတွေကို ဘန်းချောင်းဒေသမှာ ပထမဆုံး လက်ခံစကားပြောတဲ့ ကစယ်ဒိုမြို့နယ် ဥက္ကဌ ပေါ့။ အခု တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်ဒါးကျော်ဟာလဲ ကျနော်တို့ကို အဲဒီဘန်းချောင်းဘေးမှာ အားပေးစကား ပြောခဲ့သူပေါ့။ အဲဒီတုန်းက အသက် ၃၀ ကျော် ၄၀ ၀န်းကျင်သာ ရှိပုံရသေးတဲ့ ဗိုလ်ဒါးကျော်ဟာ အခုတော့ အသက် ၆၀ ကျော် တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဒါးကျော် ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ အသက် ၂၀ ကျော်မှာ တောခိုခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့လည်း အသက် ၅၀ နား ကပ်လာခဲ့ပြီပဲလေ။
“ခင်ဗျားက ၂၅ နှစ်အတွင်း ပထမ ဆုံးအကြိမ် ပြည်တော်ပြန် ဆိုတော့ ကျနော်က နှစ် ၄၀ အတွင်း ပထမဆုံး ပြည်တော်ပြန်ပေါ့ဗျာ။ ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက ထားဝယ်ကို ကျနော်ရောက်ခဲ့တယ်” လို့ ဗိုလ်မှူး ဒါးကျော်က ထားဝယ်လိုနဲ့ အားပါးတရ ပြောပြနေပါတယ်။ တောထဲက အတွေ့အကြုံတွေ၊ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေကို ပြောပြီးတဲ့နောက် စကားလမ်းကြောင်းက ထီးခီး-ထီးထာ-အမို ရွာတွေဘက် ရောက်လာပါတယ်။ “အဲဒီရွာတွေ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စနား ဘယ်ရောက်ဦးမလဲဗျာ။ အခုချိန်အထိ တပ်နေရာချထားရေး ကိစ္စတောင် မပြတ်သေးဘူး” လို့ တပ်မဟာမှူးက ဆိုပါတယ်။
အပစ်ရပ်ဖြစ်စဉ်ရဲ့ သဘောတူညီချက်တွေအရ တပ်နေရာချထားရေး ကိစ္စပြီးမှ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ နယ်မြေစိုးမိုးရေး ကိစ္စ၊ စီးပွားရေးကိစ္စ၊ စာပေယဉ်ကျေးမှုကိစ္စ စသဖြင့်ရှိပြီး နောက်ဆုံးကျမှ နိုင်ငံရေးကိစ္စဆီ ရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
“နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ရောက်ဖို့ကတော့ အကြာကြီး လိုဦးမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ” လို့ တပ်မဟာမှူးက ငြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ လောလောဆယ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြေယာပြသာနာကို သူက ဆွေးနွေးပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ထီးခီး-ထီးထာ-အမို အပါဝင် အရင်က KNU အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ရှိ ရွာတွေကို စစ်တပ်က သိမ်းပြီး လူသစ်တွေကို နေရာချပေးတာ၊ ပြန်ရောင်းစားတာတွေ လုပ်ထားတဲ့အတွက် အခု ငြိမ်းချမ်းရေးရလို့ ပြန်လာတဲ့ ကရင်ရွာသားတွေ အတွက် မြေလည်းမရှိ၊ အိမ်လည်းမရှိ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟာ အရေးပေါ် ဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုနေတယ်လို့ သူက ထောက်ပြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီးနောက် အလျင်အမြန် ဆက်လုပ်ဖို့လိုနေတဲ့ ပြည်လည် တည်ဆောက်ရေး ကိစ္စတွေပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဘာပြောပြော KUN တပ်မဟာမှူးတဦးနဲ့ ABSDF ကျောင်းသားဟောင်း တဦးတို့ တိုင်းပြည် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး အတွက် ဆွေးနွေးနေတာဟာ တိုးတက်မှုတခုလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀ နှစ်ကျော်လုံးလုံး ကျနော်တို့ နှစ်ဦးကြား ဆွေးနွေးမှုဟာ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး ကိစ္စမဟုတ်။ စစ်အစိုးရကို အပြုတ်တိုက်ရေးအတွက် လက်နက်စုရေး၊ လူစုရေးကိစ္စသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးအတွက် စဉ်းစားနေပြီဆိုတော့ ဒါ သဘောတရားအရ တိုးတက်လာတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တချိန်က ကျနော်တို့ရဲ့ ရန်သူတော် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လက်ရှိအစိုးရက တိုင်းပြည် တည်ဆောက်ရေးအတွက် တကယ် စဉ်းစားနေတာ ဟုတ်ရဲ့လား၊ မသေချာသေးပါ။
သေချာတာ တခုကတော့ ကျနော်တို့ အခုစကားထိုင်ပြောနေတဲ့နေရာ၊ အိမ်နီးချင်းထိုင်း နိုိုင်ငံမှာတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာလို တခါမှ ပြည်တွင်းစစ် မရှိတဲ့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၀ ၀န်းကျင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ် စဖြစ်ပြီး ကွန်မြူနစ်တွေ တောခိုချိန်၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ တောခိုချိန်။ ၁၉၇၀ ၀န်းကျင်မှာ ဦးနုရဲ့ ပြည်ချစ်အဖွဲ့တောခိုချိန်။ ၁၉၈၈ ကျောင်းသားတွေ တောခိုချိန် စသဖြင့် ကျနော်တို့ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေစဉ် ကာလတလျှောက်လုံးမှာ အချင်းချင်း တိုက်စရာမလိုဘဲ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးချည်း တောက်လျှောက်လုပ်ခွင့် ရနေတော့ ကျနော်တို့ထက် အများကြီးရှေ့ရောက် သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်အတွင်း ကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်း မြင်ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကိုမီအောင် ကျနော်တို့ ဘယ်လောက် အချိန်ယူ တည်ဆောက် ရဦးမလဲ။
အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ခွင့်မရသေးတဲ့ တောင်ပိုင်းဒေသ KNU တပ်မဟာမှူးနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားဆဲ ABSDF ဗဟို ကော်မတီဝင်တွေနဲ့ မဲဆောက်မှာ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် (သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ ABSDF အဖွဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်)။ အခြေနေအရပ်ရပ်ကို သူတို့ရှင်းပြတဲ့အပြင် ကျနော်ရဲ့ အမြင်တွေကိုလည်း သူတို့က မေးကြပါတယ်။ သတင်းထောက်တွေဟာ သူများအမြင်တွေကို အားမနာတမ်း မေးရဲသလောက် ကိုယ်အမြင်ကို ပြောဖို့ကျတော့ တုန့်ဆုတ်လေ့ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ “အရင်အပိတ်ခံထားရတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်တွေ အခုပြောချင်တာ ပြောခွင့်ရပြီပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတခုကလွဲရင်တော့ ကျန်တာ ဘာမှ မထူးသေးပါဘူး” လို့ ကျနော်က ပြောပါတယ်။
အဲဒီစကားလုံးဟာ အခုခရီးစဉ်အတွင်း မေးသမျှလူတွေကို ကျနော်ဖြေနေကျ စကားလုံးတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလူတွေကျတော့ ဒီလောက်နဲ့မရ။ “သာမန်လူတွေရဲ့ အခြေနေအပြင် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းကိုရော ခင်ဗျားဘယ်လိုမြင်သလဲ” လို့ မေးလာသူကလည်း အတော်များပါတယ်။ အဲဒါ အတော် အဖြေရကျပ်တဲ့ မေးခွန်းပေါ့။ NLD ရုံးတို့၊ SNLD ရုံးတို့၊ ၈၈ ရုံးတို့၊ နေပြည်တော်က လွှတ်တော်ရုံးဘေးတို့ဆီ ကျနော်ရောက်ခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ဘယ်သူနဲ့မှ တရားဝင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးခဲ့တာ မဟုတ်။ ဒါပေမယ့် မြင်သမျှ ကြားသမျှပေါ် မူတည်ပြီး တခုခုတော့ ပြောသင့်တယ်လို့ ကျနော် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ပထမ ဆုံးပြောသင့်တာက အစိုးရဖက်က ရိုးသားမှုရှိရဲ့လား ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ ABSDF အပါဝင် နယ်စပ် တကြောက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ အားလုံး တပြေးညီရှိရဲ့လား။ တပ်ပေါင်းစုနဲ့ ဘာကြောင့် မဆွေးနွေးသလဲ။ တချို့နေရာမှာ ဆွေးနွေးပြီး တချို့နေရာမှာ ဆက်တိုက်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ။ ဒုတိယ ကိစ္စက အပြင်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ ပြန်လာရေးကိစ္စ။ ကျနော်ရဲ့ ရန်ကုန်ခရီးစဉ်အတွက် ဘန်ကောက်သံရုံးကနေ ဘာမှ အမေးအမြန်းမရှိပဲ Social ဗီဇာကို အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးလိုက်ပေမယ့် ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိက၊ သြစတေးလျ စသဖြင့် ဒေသတွေရှိ မြန်မာသံရုံးမှာ ဗီဇာလျှောက်တဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ အားလုံးကို အရင်လို ဆွေ ၇ ဆင့် ဖောင်ဖြည့်ခိုင်းတာ။ ရန်ကုန်ရောက်ရင် နိုင်ငံရေး မလုပ်ဘူးလို့ ၀န်ခံချက် ထိုးခိုင်းတာမျိုးတွေ ဆက်လုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အစိုးရဖက်က မရိုးသားတဲ့ သို့မဟုတ် အားလုံးအတွက် တပြေးညီ မူဝါဒမရှိဘဲ လက်တန်းလုပ်နေဆဲ ဆိုတဲ့သဘောမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျန်တဲ့မရိုးသားမှုတွေကိုတော့ လွှတ်တော်တွင်း လွတ်တော်ပမှာ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ နေ့စဉ်လိုလို သိနေမြင်နေပြီးသား ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကဲ … အစိုးရပြီးတော့ အတိုက်ခံဘက်ကို လှည့်ကြစို့။ “အတိုက်ခံဘက်ကလည်း အခု ခင်ဗျားတို့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ဖို့ပြင်နေသလိုပေါ့ဗျာ။ တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ ရပ်မခံနိုင်တော့ တဖွဲ့ချင်း သင့်သလို လုပ်ရသလိုပေါ့။ ရန်ကုန်မှာလည်း တဖွဲ့ချင်းက သူသန်သလို သူလုပ်၊ ကိုယ်သန်သလို ကိုယ်လုပ် ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ စနစ်တကျသွား နေတာမျိုး မတွေ့ရသေးဘူး” လို့ ဆရာကြီးလေသံနဲ့ ပြောလိုက်မိပါတယ်။
နောက်နေ့တွေမှာတော့ ABSDF ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေအပြင် တခြားခေါင်းစဉ် အမျိုးမျိုးနဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်းတွေ၊ မီဒီယာသမားတွေကို မဲဆောက်နဲ့ ချင်းမိုင်မှာတွေ့ဆုံပြီး ကျနော် စကားပြောခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ABSDF မှာ အင်အား သိပ်မရှိတော့ပေမယ့် ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဟာ သမ္မတ အကြံပေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ အပါအ၀င် နေရာအတော်များများမှာ ဆက်လက် ပါဝင်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအဖွဲ့က ဗဟိုကော်မတီဝင် ဟောင်းတွေရဲ့ အမြင်ဟာ ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
“အခြေနေတွေကတော့ ဗလုံးဗထွေးနဲ့ သူ့လူမှန်းမသိ၊ ကိုယ်လူမှန်းမသိ အခြေနေပေါ့ကွာ။ ဒီတိုင်းသာ မူမရှိ၊ဘောင်မရှိ ဆက်သွားနေရင် သိပ်စောင့်စရာမလိုပါဘူး။ သမိုင်းက နောက်တပတ် ပြန်လည်လာဦးမှာပါ။ ဒီအတွက် အခုကတည်းက ငါတို့ အဆင်သင့် ပြင်ထားဖို့လိုတယ်” လို့ ကျနော် တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဟောင်းတွေထဲက အနည်းဆုံး ၂ ဦးက ပြောပါတယ်။ သူတို့ ၂ ဦးဟာ အခုချိန်အထိ ပြည်တော်တခါမှ မပြန်သေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ရင်းနှီးသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အမြင်ဟာ လက်ရှိသွားနေတဲ့ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို မကောင်းဘက်ကနေ မြင်လွန်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ဒီလိုအမြင်ရှိသူ ဘယ်လောက်များများ ရှိနေသလဲ။ သူတို့မြင်သလို တကယ်ပဲ ပြန်ဖြစ် သွားနိုင်သလား ဆိုတာဟာ စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အပေါ် အားမလို အားမရ ဖြစ်နေကြတဲ့ အကြောင်းပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ စစ်တပ်ကို စည်းရုံးတာအပြင် ပါတီတည်ဆောက်ရေး၊ မဟာမိတ် တည်ဆောက်ရေး၊ လူထုပါဝင်လာရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အဓိကဆောင်ရွက်ပြီး ကိုယ်အင်အားကို ချဲ့ဖို့လိုကြောင်း။ အဲဒီအင်အားကိုပြပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအပါဝင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ရနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ တချို့က ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ အဲဒီနည်းနဲ့ ခရီးသွားခဲ့တာ နှစ် ၂၀ ကျော် ကြာတဲ့အထိ ဘာမှမဖြစ်လို့ အခုနည်းသစ်ကို စမ်းနေတာ၊ ဒီနည်းကလည်း သူကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မလုပ်နိုင်တဲ့ အနေထားဆိုတော့ ဒါကို စောင့်ကြည့်သင့်တယ်။ စစ်တပ်နဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး မပါရင် ဖွဲစည်းပုံပြင်ရေး ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တဆက်ဆည်းမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD မှာ ယန္တယားမရှိဘူး။ အင်စတီကျုးရှင်း မရှိဘူး။ အရန်ခေါင်းဆောင်မှု အင်အားမရှိဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တယောက်တည်းအပေါ် မှီခိုလွန်းနေတယ်။ သူ့ကို အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်သူတွေ၊ အကြံပေးအဖွဲ့တွေ လိုနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နောက်တခါ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးအတွက် NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က နှေးလွန်းနေပြီး အထူးသဖြင့် ပြည့်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မီတီ CRPP အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေ အပေါ် ဒီထက်မက ထဲထဲဝင်ဝင် ဆက်ဆံသင့်တယ်လို့ သူတို့က ဆိုပါတယ်။ နောက်တခါ ၈၈ မျိုးဆက် သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့စည်းအပါဝင် လူငယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လည်း ဒီထက်မက ထဲထဲဝင်ဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ သို့မဟုတ် ဦးဆောင်မှုပေးဖို့ လိုနေတယ်လို့ သူတို့က ထောက်ပြကြပါတယ်။
တိုင်းပြည်ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး အပိုင်းမှာတော့ အစိုးရဘက်က စီးပွားရေး ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် အခုချိန်အထိ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာနိုင်ဖို့ တိကျတဲ့လုပ်ငန်းစဉ် မထုတ်ပြန်နိုင်သေးကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် အလုပ်အကိုင်သစ်တွေလည်း ဖန်တီးမပေးနိုင်သေးတဲ့အတွက် အလုပ်သမား အများစုဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို အရင်ကလို ထွက်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ နောက်တခါ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက် မဟာဗျုဟာလုပ်ငန်းစဉ် ဘာမှမရှိသေးကြောင်း၊ သင်ရိုးညွန်းတမ်းပြုပြင်ရေး။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီပညာရေး၊ လူငယ်များ ကာယဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အဟာရပြည့်ဝရေး၊ ဆေးကုသခွင့်ရရေး၊ ကျေးရွာတိုင်း ဆေးပေးခန်းရှိရေး၊ စသဖြင့် ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ် ဘာမှ မရှိသေးဘူးလို့ သူတို့က ထောက်ပြကြပါတယ်။
မဲဆောက်က မပြန်ခင် နောက်ဆုံး တရက်မှာတော့ ကျောင်းသား ဆေးခန်းခေါ် ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ဆေးခန်းဆီ ကျနော် ရောက်သွားပါတယ်။ စင်သီယာဆိုတာ ၁၉၈၈ တုန်းက ကျနော်တို့နဲ့အတူ တောခိုလာတဲ့ ကျောင်းသူတဦးပေါ့။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တချို့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း ကိုယ်တိုင် ဒီမယ်တော်ဆေးခန်းအထိ ရောက်လာပြီး ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ဆေးခန်းပြန်ဖွင့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အခု ကျနော်ရောက်သွားတဲ့ နေ့မှာလည်း NLD ပါတီက လွှတ်တော်အမတ် တဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း မယ်တော်ဆေးခန်းဆီ ရောက်နေပါတယ်။ ၀န်ကြီးတွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကိုယ်တိုင် ဒီဆေးခန်းဆီ ရောက်လာဖို့ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ ကာလအတွင်း ဘယ်လိုမှ စိတ်ကူးယဉ်လို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေပေါ့။ အခုတော့ အခြေနေတွေက ပြောင်းလဲကုန်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်အထိ ပြောင်းလဲနေသလဲ ဆိုတာကတော့ မေးခွန်းရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“တိုက်ပွဲမရှိတော့လို့ မိုင်းထိတဲ့လူနာ နည်းနည်း လျှော့သွားတာကလွဲရင် ကျန်တာတွေ ဘာမှ မပြောင်းသေးဘူးဗျ။ လူနာအရေအတွက်က အရင်ထက်တောင် ပိုများလာနေသေးတယ်။ ဟိုမှာ ခင်ဗျား တွေ့တယ်မို့လား။ မျက်စိလာပြတဲ့ လူတွေဆို ဟိုး … ရန်ကုန်၊ ပုသိမ်က အထိပါတယ်” လို့ ၈၈ ကတည်းက တောခိုပြီး အခုချိန်အထိ မယ်တော်ဆေးခန်းမှာ တာဝန်ယူနေဆဲ ၀ါရင့်ဆေးမှူးတဦးက ပြောပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ခြေတုလက်တုဌာနနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာဌာနမှာ လူနာနည်းနည်း လျှော့သွားပေမယ့် ဖျားနာဆောင်၊ မီးဖွားဆောင်။ ပြင်ပလူနာဆောင်တွေမှာ လူတွေကြိတ်ကြိတ် တိုးနေဆဲ။ မြ၀တီဘက်ကနေလာတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ၊ လိုင်းကားတွေ၊ ငြိမ်းအဖွဲ့ကပိုင်တဲ့ လိုင်းကားတွေက ဆေးခန်းတွင်းနဲ့ ဆေးခန်းရှေ့မှာ နည်းတာမဟုတ်။ ဆေးခန်းရှေ့မှာဆိုရင် မယ်တော်ကားဂိတ်တောင် ဖြစ်နေပြီ။
အဲဒီကားဂိတ်က လိုင်းကားကိုစီးပြီး သောင်ရင်းမြစ်ဘေးက မြ၀တီကမ်းနားကို သွားလေ့လာတော့ ၀င်လာမစဲ၊ တဖွဲဖွဲဆိုသလို များလိုက်တဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ။ တံတားပေါ်ကတမျိုး၊ တံတားအောက်ဘက်ရှိ ဂိတ်တွေကနေ မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတဖုံ၊ ရေလယ်ကျွန်း ခိုးလမ်းကနေ တသွယ် ၀င်လာနေတဲ့လူတွေ ထောင်နဲ့ချီရှိနေပါတယ်။ အရင် မဲဆောက်ကို ရောက်စဉ်က တွေ့ဖူးတာထက် အခုတခေါက်မှာ လူဝင်လူထွက်က ပိုများလာတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အဲ … ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာတခုကတော့ အရင်က ခိုးဝင်လာကြတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေဟာ အခုတော့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ၊ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်တွေနဲ့ပေါ့။
ဒါဟာ အခုခေတ်ပြောင်းကာလ အစိုးရသစ်လက်ထက် လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်တဲ့ သာမန်လူထုကြားက တခုတည်းသော တိုးတက်မှုလို့ ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး တိုးတက်မှုတွေ တခြားနယ်ပယ်တွေမှာ ဘာလို့ မတွေ့ရသေးတာလဲ။ ပိုက်ဆံနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရင် ချက်ချင်းထလုပ်လို့ ရနိုင်တဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ လက်ကိုင် မိုဘိုင်းဖုန်းပါမစ် တိုးထုတ်ပေးတာမျိုးမှအပ ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေကို မဆောင်ရွက်နိုင်သေးတဲ့ သဘောလား။ အဲဒီရေရှည်ကိစ္စတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ အစိုးရနဲ့ ပါတီတွေမှာ၊ အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ လူတဦးချင်းစီမှာ Capability တွေ လိုနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား။ အဲဒီအတွက် အခုအစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ လူငယ်တွေကို ဘယ်လို သင်ကြားပေးနေသလဲ။ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်နေပါသလဲ။
အနှစ်ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ အပေါ်ထပ် အဆောက်ဦမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေပြီလို့ ပါလီမန်ထဲကနေ ဘယ်လိုပဲပြောနေပါစေ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးနေပြီလို့ ဘယ်လိုပဲ ကြေညာနေပါစေ။ အတိုက်ခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် တို့အကြား နားလည်မှုတွေ ရနေပြီလို့ ဘယ်လိုပဲဆိုနေပါစေ၊ သာမန်အရပ်သား ဆင်းရဲသားတွေ အတွက်ကတော့ ဘာမှ ထူးခြားမလာသေးတဲ့အတွက် ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ဆေးခန်းမှာ လူနာတွေ အရင်ကထက် များလာဆဲ။ သောင်ရင်းမြစ်ကိုကူးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံထဲ အလုပ်ဝင်လုပ်ဖို့ ထွက်လာသူတွေ အရင်ကထက် များလာဆဲ ဖြစ်နေတာကို မြင်နေရတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ။
ထိုင်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ ထိုင်းနံပါတ်ပြားတပ်ယာဉ်များ ထားဝယ်တွင် ဖမ်းဆီး
12:23 AM Htet Aung Kyaw No comments
|Dawei Watch| ထားဝယ်၊ သြဂုတ် ၁၄
ထိုင်းမော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ပြားများ တပ်ဆင်ကာ ဒေသအတွင်း မောင်းနှင်နေသော ထိုင်းဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ အီတလျှံ-ထိုင်းကုမ္ပဏီ (ITD ) ပိုင် မော်တော်ယာဉ် ၁၅ စီးခန့်ကို သြဂုတ်လအတွင်း ဖမ်းဆီးထားကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးကြည်လင်းကပြောကြားသည်။
ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းတွေ့ရတဲ့ ထိုင်းနံပတ်တပ် ကားတစီး (ဓာတ်ပုံ-ထက်အောင်ကျော်)
ထားဝယ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်နေသော ယင်းကုမ္ပဏီသည် စီမံကိန်းစတင်ကတည်းက အချို့ယာဉ်များကို မြန်မာနံပါတ်သို့ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ ထိုင်းနံပါတ်ပြားဖြင့် နှစ်ချီ၍စီနင်းလေ့ရှိသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် မေလ ထီးခီးနယ်စပ်ဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်း စတင်ဖမ်းဆီးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နယ်စပ်တွင် အခွန်ဆောင်ကာ ယာယီထုတ်ပေးလိုက်သည့် နံပါတ်ပြားများ၊ စတစ်ကာများကို တပ်ဆင်ပြီး ထားဝယ်ဒေသ အတွင်းသို့ မောင်းနှင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း နယ်စပ်တွင် အခွန်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် ထပ်မံအခွန်မဆောင်ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံ မှ ထုတ်ပေးထားသော မော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ပြားများကို တပ်ဆင်ကာ ကုမ္ပဏီမှ မော်တော်ယာဉ်များ ဒေသအတွင်း ဖြတ် သန်းမောင်းနှင်ခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဘက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ မော်တော်ယာဉ်တွေ မောင်းနှင့်ခွင့်မပြုထားသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်တွင် လည်း ထိုင်းမှယာဉ်များ ခွင့်မပြုကြောင်း၊ သြဂုတ်လအထိစာရင်းများအရ အခွန်ဆောင် မောင်းနှင်ခွင့်ပြုထားသော ထိုင်းကုမ္ပဏီ ၃၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း ရဲမှူးကြီးက ရှင်းပြသည်။
“ITD ကုမ္ပဏီမော်တော်ယာဉ်တွေ မြန်မာနံပါတ်များတပ်ပြီး မောင်းနှင်ရမယ်”ဟု ရဲမှူးကြီးက ဆိုသည်။
ITD ကုမ္ပဏီမှ ယာဉ်မောင်းအားလုံး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး မလိုက်နာလျှင် နိုင်ငံ၏ ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကာ သတ်မှတ်ထားသည့်စတစ်ကာ၊ မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(အုံနာဘုတ်)၊ လိုင်စင်ပါရှိ ရမည်ဖြစ်ကာ မလိုက်နာလျှင် ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရဲမှူးကြီးက ရှင်းပြသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းပြရန် ယာဉ်ပိုင်ရှင်နှင့် ITD ယာဉ်မောင်းများကို လာမည့်အပတ်အတွင်း
တွေ့ဆုံသွားမည်ဟု တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးထံမှသိရသည်။
ထားဝယ်-ကန်ချနပူရီကားလမ်း (ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်း) ပေါ်တွေ့ရတဲ့ ထိုင်းနံပတ်တပ် ယဉ်တစီး ( ဓာတ်ပုံ-ထက်အောင်ကျော်)
အလားတူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) မှ တရားမ၀င်မော်တော်ယာဉ်များလည်း ထားဝယ်ဒေသအတွင်း ၀င်ရောက်နေသောကြောင့် စာလေးကြိမ်ပေးပို့ကာ ကန့်ကွက်ထားပြီး KNU ဘက်မှ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြားထားကြောင်း ရဲမှူးကြီးက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံထုတ်ပေးသော တရားဝင်နံပါတ်မရမီ ယာယီနံပါတ်များကိုတပ်ဆင်ကာ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းနဲ့ အညီမောင်းနှင်သင့်သလို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေကိုလည်း လေးစားလိုက်နာပြီး
နေထိုင် သင့်ကြောင်း ထားဝယ်ဒေသခံဦး ဦးမင်းအောင်သူက ဆိုသည်။
အကောက်ခွန်ဌာန၏ဥပဒေအရ အကောက်ခွန်ဆောင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်သည်
စီမံကိန်းကာလ အကြမ်းပြင်း နှစ် နှစ်သတ်မှတ်ထားလျှင် နှစ်နှစ်ပြီးလျှင် သက်တမ်းတိုးရမည်ဖြစ်သည်။
12:02 AM Htet Aung Kyaw No comments
|Dawei Watch| ထားဝယ်၊ သြဂုတ် ၁၃
ထားဝယ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချနာဘူရီသို့ ထီင်္းခီးနယ်စပ်ဂိတ်မှ တဆင့် နေ့ချင်းပြန် တစ်နေ့တာ သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထားဝယ်-ထီးခီး ယာဉ်လိုင်းများထံမှ သိရသည်။
စီမံကိန်းသုံး ကားတစီးကို ထီးခီးနယ်စပ်အနီးတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ထက်အောင်ကျော်)
နေ့ချင်းပြန် သွားနိုင်ရန်အတွက် ထားဝယ်မှ နံနက် ၄ နာရီ ခန့်အချိန်တွင် ထွက်ခွာရန် လိုအပ်ကာ ထီးခီးသို့ နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ထီးခီးမှတဆင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာလျှင် နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ကန်ချနာဘူရီသို့ ရောက်ရှိမည်ဟု အဆိုပါ ယာဉ်လိုင်း တာဝန်ခံများက ရှင်းပြသည်။
ထို့နောက် ကန်ချနာဘူရီတွင် လည်ပတ်ပြီး နေ့လည် ၂ နာရီ သို့မဟုတ် ၃ နာရီခန့်တွင် ပြန်ထွက်ခွာလာပြီး ထားဝယ်မြို့သို့ ည ၇ နာရီ သို့မဟုတ် ၈ နာရီခန့်တွင် ပြန်ရောက်နိုင် ကြောင်း ၎င်းတို့က ထပ်လောင်း ရှင်းပြသည်။
“ဟိုမှာ ၅ နာရီလောက် တော့ လည်ပတ်ခွင့် ရတာပေါ့” ဟု တောင်ပေါ်သား ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမှ တာဝန်ခံ ဦးသန်းနိုင်က ဆိုသည်။
မြန်မာနယ်စပ် ထီးခီး ဂိတ်တွင် ယာယီနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့်လက်မှတ်များကို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်ပြီး ကန်ချနာဘူရီခရိုင် အတွင်း လွတ်လပ်စွာ လည်ပတ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ဖုနန်းရွန် နယ်စပ်ဖြတ်ဂိတ်စခန်း (ဓာတ်ပုံ- ထက်အောင်ကျော်)
တစ်ဦးစ နှစ်ဦးစ နေ့ချင်းပြန်သွားလိုသူများအနေဖြင့် ထားဝယ်မှ ထီးခီးအထိ ပြဿနာ မရှိသော်လည်း ထီးခီးမှ ကန်ချနာဘူရီ ခရိုင်အတွင်း လည်ပတ်ရာတွင် လူအနည်းအငယ်ဖြင့် ကားစီးရမည်ဖြစ်၍ အုပ်စုလိုက်သွားသူများထက် ကုန်ကျစရိတ် ပိုများမည်ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းသစ်ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေး တာဝန်ခံ ဦးမျိုးပိုင်သိန်းက ရှင်းပြသည်။
“တစ်ယောက်တည်း သွားတာထက် အဖွဲ့နဲ့ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်” ဟု ဦးမျိုးပိုင်သိန်းက ဆိုသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ပွင့်လင်း ရာသီရောက်လျှင် နေ့ချင်းပြန် ခရီးစဉ်ဟူ၍ သီးသန့်ထားရှိရန် စီစဉ်ထားကြောင်း၊ အဆိုပါ ခရီးစဉ်များကို ခရီးသည် အနည်းအများအပေါ် မူတည်၍ ဆယ်ရက်တစ်ခေါက် သို့မဟုတ် တစ်ပတ် တစ်ခေါက်စသည်ဖြင့် ပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါယာဉ်လိုင်းများထံမှ သိရသည်။
ထီးခီးနယ်စပ်ရှိ ထားဝယ်-ကန်ချနပူရီ လမ်းပြမြေပုံ (ဓာတ်ပုံ- ထက်အောင်ကျော်)
လက်ရှိတွင် ထားဝယ်မှ ကန်ချနာဘူရီ ခရီးစဉ်ပြေးဆွဲရာတွင် မိုးရာသီဖြစ်သည့်အတွက် သတိထားမောင်းနှင်နေရပြီး ထားဝယ်မှ ထီးခီးအထိ ၄ နာရီခန့်၊ ထီးခီးမှ ကန်ချနာဘူရီအထိ ၄၅ မိနစ်ခန့် မောင်းနှင်ရကြောင်း ၎င်းတို့ထံမှ သိရသည်။
ခရီးအကွာအဝေးမှာ ထားဝယ်မှ ထီးခီးအထိ ၉၇ မိုင်ရှိပြီး ထီးခီးမှ ကန်ချနာဘူရီအထိ ၆၂ မိုင်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
1:16 PM Htet Aung Kyaw No comments
By SIMON ROUGHNEEN / THE IRRAWADDY| Monday, August 12, 2013
ABSDF fighters eatameal near the frontline in Kachin State, in December 2012. (Photo: Simon Roughneen / The Irrawaddy)
RANGOON – The Burma government and the All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) announcedatruce on Saturday that will see the long-time antagonists startapolitical dialogue, inapossible end toaquarter century of on-off armed rebellion by the former students against what was one of the world’s most brutal military regimes.
The deal, which could see the ABSDF open four liaison offices inside Burma, comes two days after the now-40-something leaders of the 1988 student uprising against the military regime marked their Silver Jubilee with three days of ceremony and speeches in Rangoon.
Both government ministers and opposition presidential candidate Aung San Suu Kyi, whose own political career was launched on the back of the uprising, attended the festivities.
The Burmese junta’s brutal crackdown on the demonstrations prompted some student demonstrators to formamilitia aimed at overthrowing it: the ABSDF.
Minister Aung Min, the government’s main peace negotiator, told The Irrawaddy that the deal illustrated the changes sweeping Burma. “The essence of the gathering was that people who once fought against each other can share the same room—and this isatestament to the moves we are making toward democracy,” he said.
Since ushering throughaseries of reforms in March 2011, the Burma government has freed political prisoners, including the key 1988 student leaders, and relaxed bans on trade unions and public protests.
But in the past few days, leaders ofamarch through Rangoon commemorating the 1988 events have been charged with holdingapublic protest withoutapermit. Protestors against land-grabs have also been jailed in recent months.
And although there are 17 ceasefires signed or in negotiation, according to the Myanmar Peace Monitor,aproject set up to track the various peace processes, fighting between the Burma Army and ethnic rebels continues in northern Shan and Kachin states.
Inaprelude to Saturday’s agreement, the ABSDF signedaregional deal with the Karen State government on August 5.
Than Khe, chairman of the ABSDF, described Saturday’s deal asa“first step,” adding that progress “depends on the attitude of the government.”
But it seems that the ABSDF will focus on negotiations, rather than armed struggle, in the future. “Our uprising was for democracy and human rights,” Than Khe told The Irrawaddy, before adding that “now we have to go ahead with this new path, this political new phase.”
International observers were present as the deal was signed on Saturday. Emma Leslie, executive director of the Phnom Penh-based Center for Peace and Conflict Studies, told The Irrawaddy that the agreement was significant because it was “the first union-level deal between the government and the ABSDF.”
Also in attendance was Thein Zaw, vice-chairman of the Union Peacemaking Work Committee and chairman of the Parliament Committee on National Race Affairs and Internal Peacemaking.
In July, House speaker and presidential hopeful Shwe Mann sought greater Parliament input into the various peace talks between the government and rebel militias,amove widely seen as an attempt to bolster his own standing ahead of Burma’s 2015 national elections.
88 Generation leaders Min Ko Naing and Ko Ko Gyi—fresh from their gala commemorations—served as observers to the peace talks, as did Mya Aye, another student demonstrator in 1988, who told The Irrawaddy that “it wasasmooth negotiation and it went well.”
Informal negotiations between the government and the ABSDF have been taking place for almost two years, said Aung Naing Oo,aformer ABSDF member who now works for government-linked think-tank the Myanmar Peace Center.
“Things took time at first,” he told The Irrawaddy. “But in the last few days the talks went very well and very smoothly.”
The army’s 1988 crackdown killed an estimated 3,000 civilians, prompting some protestors to take to Burma’s jungle borderlands. The 25 years of sporadic fighting since then have cost the lives of 600 ABSDF fighters.
Since then, the “student army” has struck alliances withanumber of Burma’s ethnic militias and lost 600 fighters in anti-government fighting. Dozens of members were executed amid internal purges during the 1990s, and foratime the ABSDF was listed asaterrorist organization by the United States.
The ABSDF has set upaTruth and Justice Commission to look into the killings. Criminal proceedings have been started by family members of some of the deceased.
ထက်အောင်ကျော်| August 11, 2013 | ဧရာဝတီ။
ပုဂံခရီးစဉ် အပြီးမှာတော့ ဗီဇာကလည်း ကုန်ဖို့ ၂ ရက်သာ ကျန်တော့တဲ့အတွက် ရန်ကုန်ကို အမြန် ပြန်ဆင်းလာရပါတယ်။ ပုဂံ-ရန်ကုန် ကားပေါ်မှာ ရန်ကုန်-နေပြည်တော် ကားထက် နိုင်ငံခြားသား ပိုများတာတွေ့ရပြီး ခရီးသည် ၃ ပုံ ၂ ပုံ လောက်က နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားကလည်း ကောင်း၊ ကားဆရာတွေကလည်း ကျွမ်းတဲ့အတွက် ဒ်ီခရီးစဉ်က စိတ်ချရလောက်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တနေ့ည (မေလ ၂၅ ညက) ကမှ ဒီအဝေးပြေး ကွန်ကရစ် လမ်းမသစ်ကြီးပေါ်မှာ ကားထပ်မှောက်လို့ နိုင်ငံခြားသားတွေ အပါအ၀င် လူ ၁၂ ဦး သေဆုံးထားတဲ့ သတင်းက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး ဖြစ်နေတော့ စိုးရိမ်စိတ်ကို ဘယ်လိုမှ လျှော့ချလို့မရ။ ပုဂံကနေ ရန်ကုန်မြို့ဝင်တဲ့အထိ ကောင်းကောင်း အိပ်လို့ မပျော်ခဲ့ပါ။
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါတယ်လို့ ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်ခံနေရတဲ့ ပုဂံ-ရန်ကုန် အထူးဘတ်စကားဟာ ရန်ကုန်မြို့ ၀င်ခါနီး ခရေပင်လမ်းခွဲနား ရောက်မှ မြန်မာဇာတိပြပါတော့တယ်။ မနက် ၅ နာရီဝန်းကျင် မှောင်မဲနေဆဲမှာ ကားကို ရပ်လိုက်ပြီး “အောင်မင်္ဂလာအထိ သွားရင် လူသိပ်ရှုပ်တယ်၊ ဒီမှာဆင်းတာ ကောင်းတယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ထဲအထိ ၄၀၀၀ ပဲ ယူပါတယ်” လို့ ကားပေါ်တက်လာတဲ့ တက္ကစီသမားတွေက အော်ပြောပါတယ်။ ကားကို ဒီမှာရပ်ပြီး ဒီလိုလုပ်မယ် ဆိုတာကို စပယ်ယာက ဘာမှကြိုတင်ရှင်း ပြထားခြင်းမရှိပါ။ အခု တက္ကစီသမားတွေ ကားပေါ်ရောက်ပြီး ဖောက်သည် ခေါ်နေတဲ့အထိ စပယ်ယာက ဘာမှဝင်မပြောသေး။ မြန်မာတွေက တက္ကစီသမားတွေ ခေါ်တာကို နားလည် နိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားတွေက မနက်စောစောစီးစီး ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ နားမလည်နိုင်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့။
မြန်မာအများစုက သဘောပေါက်ပြီး ဒီမှာ ဆင်းလိုက်ကြပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ မဆင်းပါ။ ဂိတ်ဆုံးအထိ ဆက်လိုက်သွားကြမယ့်ပုံပါပဲ။ စပယ်ယာကို ကိုယ်တိုင်သွားမေးတော့ ဒီမှာဆင်းတာ ပိုကောင်း တယ်ဆိုတာနဲ့ ကျနော်လည်း ဆင်းပြီး နီးတဲ့ တက္ကစီတစီးပေါ် တက်လိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ၄၀၀၀ ဆိုတာ တဦးချင်းစီ အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး လူ ၂ ဦးအတွက် ၈၀၀၀ ယူလိုက်ပါတယ်။ ပထမတဦးကို ဗဟန်းဘက်မှာချပြီး ကျနော့်ကိုတော့ အလုံအထိ လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ ဒါလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားချက်ပါပဲ။ နေရပ်မတူတဲ့ ခရီးသည်နှစ်ဦးကို တက္ကစီ တစီးတည်းနဲ့ တင်ပြီး တယောက် ၄၀၀၀ စီယူတဲ့ စနစ်ပေါ့။
ရန်ကုန်ကို ရောက်ရောက်ချင်း ပထမဆုံး ကျနော်သွားတဲ့နေရာက ပန်းဆိုးတန်းလမ်းရှိ ပြည်ဝင်ခွင့်နဲ့ နေထိုင်ခွင့်ဌာန။ ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားတဲ့အတိုင်း အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် “လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားပြုဌာနခွဲ၊ ပြည်ဝင်၊ ပြည်ပြန်ဝင်နှင့် နေခွင့်ဌာန” ဆီကိုဖြစ်ပါတယ်။ နေပြည်တော်က ရုံးတွေမှာ အစောင့်တွေ များလှပေမယ့် ရန်ကုန်က ဒီရုံးမှာတော့ ဘာအစောင့်မှမရှိ။ အထဲ ၀င်သွားတော့ Reception ကောင်တာလည်း မရှိပါ။ အမျိုးသမီးအများစု ပါဝင်တဲ့ အဖြူ အစိမ်းလို ယူနီဖောင်းတွေ ၀တ်ထားတဲ့လူတွေက စားပွဲတွေမှာထိုင်ပြီး ဖိုင်လှန်သူလှန်။ စကားပြောသူပြောနဲ့ ကျနော်ဝင်လာတာကို ဘယ်သူကမှ အဖက်မလုပ်ပါ။
အနီးဆုံးစားပွဲက အမျိုးသမီးကြီး တဦးရှေ့က ခုံမှာထိုင်ပြီး ဆိုရှယ်ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးချင်ကြောင်းပြောတော့ ဘယ်မှာနေလဲ၊ ဘယ်လောက် တိုးချင်တာလဲ စသဖြင့် မေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်နေတဲ့မြို့နယ် လ၀ကမှာ အရင်တင်ပြဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီမြို့နယ် လ၀က က စာရပြီးမှ ဒီရုံးကိုလာပါ။ ဒါဟာ ဗဟိုရုံး ဖြစ်တယ်လို့ အရင်ခေတ် လက်ကျန် စာရေးမ မျက်နှာထားနဲ့ ကျနော့်ကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါမှ ဒုက္ခ။ ဗီဇာက မနက်ဖြန် ကုန်တော့မယ့်ဟာကို။ သူအကြံပေးတဲ့အတိုင်း ဟိုရုံး-ဒီရုံးသွားနေရရင် အချိန်တွေ ကျော်ကုန်တော့မှာပေါ့။
“အိုဗာစတေး Over Stay နေလို့ရ တယ်မို့လား။ တရက် ၃ ဒေါ်လာ ပေးလိုက်ရင် အားလုံး အိုကေတယ်လို့ ကျနော် ကြားဖူးပါတယ်” လို့ နည်းနည်း အထွန့်တက်လိုက်တော့ ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးက မျက်မှောင်ကုပ် ကြည့်ပြီး “အဲဒါဆိုရင် ဟိုဖက်စားပွဲမှာ သွားပြော” လို့ နောက်စားပွဲတလုံးဆီ လက်ညိုး ညွှန်လိုက်ပါတယ်။ စားပွဲအားလုံးရှိ ၀န်ထမ်းတိုင်း လိုလိုကတော့ မျက်နှာထား တပုံစံတည်းပါပဲ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ ပုဂံ-ရန်ကုန် အဝေးပြေးကားပေါ်က စပယ်ယာမလေးရဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ တခြားစီဖြစ်နေတယ်လို့ အလွယ်ပြောနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းနဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ ကွာမှာပေါ့လေ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီစားပွဲရှိ ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးက ကျနော်တောင် ဘာမှမပြောရသေးခင် “ဟုတ်တယ်။ Over Stay နေပြီး တရက် ၃ ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့သာ လေယာဉ်ကွင်း လ၀က မှာပေးလိုက်။ အဲဒါအကောင်းဆုံးနည်းပဲ” လို့ ပြောချလိုက်တော့ ကျနော် အတော် အံ့သြသွားပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီလိုပြောမှတော့ အိုဗာစတေးနဲ့ နေလို့ရတာ သေချာသွားပြီပေါ့။
အဲဒါသေချာပြီ ဆိုတာနဲ့ သီတင်းတပတ် ထပ်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘန်ကောက်-ရန်ကုန် အသွား အပြန် ၀ယ်ထားတဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ကို သီတင်းတပတ် ထပ်တိုးဖို့ သွားပြောရပါတယ်။ ကျနော် ၀ယ်ထားတဲ့ လက်မှတ်က ရက် ၃၀ အတွင်း ဈေးချထားတဲ့လက်မှတ်တဲ့။ ရက်ထပ်တိုးလို့ မရ။ တိုးမယ် ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ထပ်ဆောင်း ပေးရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာမှမတတ်နိုင်။
နောက်တနေ့ မနက်မှာတော့ ရန်ကုန် ရောက်နေတုန်း ဆယ်တန်းအောင်လက်မှတ် ယူသွားဦးမှဆိုပြီး ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ) ၀င်းအတွင်းရှိ ဇွဲကပင်ဆောင်ဆီ ပြေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာက အောင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးတဲ့ နေရာမဟုတ်၊ အမှတ်စာရင်း ထုတ်ပေးတဲ့နေရာသာ ဖြစ်တယ်။ အောင်လက်မှတ် လိုချင်ရင် လသာမြို့နယ်ကို သွားပါလို့ အဲဒီက လမ်းညွန်လိုက်ပါတယ်။ တက္ကစီခနဲ့ မွဲမယ့်ကိန်းပါပဲ။ လသာ ရဲစခန်းအနီးရှိ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်အဖွဲ့လို့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားတဲ့ အဆောက်အအုံတခု ရှေ့ရောက်တော့ “အောင်လက်မှတ် အမြန်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ပွဲစားမလိုပါ” ဆိုတဲ့ စာတန်းကြီးကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီ အဆောက်အအုံကြီးထဲ ၀င်သွားတော့ အောင်လက်မှတ်ရဖို့ တန်းလာစီနေတဲ့ လူငယ်တွေ အများကြီး။ “ဟောဒီမှာ ဖောင် အရင်ဖြည့်ပါ။ တစောင် ၂၅၀ တည်းပါ” လို့ စာရေးမတဦးက ပြောပါတယ်။ အဲဒီဖောင်ကိုယူဖို့ လှမ်းလိုက်တော့ ကျနော့် ကိုယ်ပေါ် မိုးစက်တချို့ ကျလာပါတယ်။ အပေါ်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်မိုးကမလုံ။ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးဌာနနဲ့ စာစစ်ဌာနကြီး ခေါင်မလုံဘဲ မိုးယိုနေတာကို ကိုယ်တိုင် မြင်လိုက်ရတယ် ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်မှအပ ကျန်လူအားလုံးက ခေါင်မလုံလို့ မိုးယိုတဲ့ ကိစ္စကို အထူးအဆန်းလို့ ထင်ထားပုံမရပါ။ အားလုံး ပုံမှန်အတိုင်းရေး၊ ပုံမှန်အတိုင်းဖြည့်၊ ပုံမှန်အတိုင်း တန်းစီပေါ့။
“ဦးလေးက သားအတွက် ကိုယ်စား လာယူပေးတာလား” ဆိုပြီး အသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော့်ဘေးမှာ ဘယ်သူမှမရှိ။ ဒီတော့မှ စာရေးမလေးက ကျနော်ကိုကြည့်ပြီး ပြောနေမှန်း ရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။ သေရော။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်အတွက် လာယူတာပါဆိုပြီး ရှင်းပြပေမယ့် “၁၉၈၃ က အောင်လက်မှတ်ကို ၂၀၁၃ ကျမှလာယူတဲ့လူ မတွေ့ဖူးပါဘူး” လို့ဆိုပြီး သူက မယုံဘဲ ကျနော် နောက်နေတယ်လို့ ထင်နေပါတယ်။ ဒုက္ခပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ဒါဟာ ထူးခြားဖြစ်စဉ် ဖြစ်တဲ့အတွက် အပေါ်ထပ်က အရာရှိနဲ့ သွားပြီ ဆွေးနွေးပါလို့ အဲဒီ စာရေးမလေးက အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ အပေါ်ထပ်ကို တက်လာပေမယ့် အခန်းဝတွေမှာ ဆိုင်းဘုတ်မရှိတော့ ဘယ်အခန်းကို သွားရမှန်းမသိ။
“ရှင့် အောင်စာရင်းက ၁၉၈၈ အောက်တိုဘာမှာ ထုတ်သွားပြီးပြီလို့ စာရင်းပြထားတယ်။ ဒီတော့ ပျောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြန်လျှောက်လွှာတင်ရမယ်” ဆိုပြီး အသက်ခပ်ကြီးကြီး ပညာရေးဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး တဦးက ပြောပါတယ်။ ဒုက္ခပါပဲ။ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာကတည်းက တောခိုသွားတဲ့လူရဲ့ အောင်စာရင်းကို အောက်တိုဘာမှာ ဘယ်သူကများ လာထုတ်သွားပါလိမ့်။ တခါမှ မထုတ်ရသေးလို့ အခု လူကိုယ်တိုင် လာထုတ်ပါတယ်ဆိုမှ ဘယ်သူက ကြားက ထုတ်သွားတာလဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို မေးခွန်းထုတ်တာကို သူတို့ မကြိုက်ပါ။
မှတ်တမ်းထဲမှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ ပျောက်ဆုံးကြောင်း အထောက်ထားပြပြီး ပြန်လျှောက်ရုံမှအပ အခြားနည်း မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘယ်လောက် ကြာမလဲဆိုတော့ အနည်းဆုံး တလလောက်တော့ ကြာမယ်လို့ ၀န်ထမ်း အမျိုးသမီးကြီးက ဖြေပါတယ်။ သေရော။
မနက်ဖြန် နိုင်ငံခြားကို ပြန်တော့မယ်။ ကိုယ်စား တယောက်ယောက်က ထုတ်ပေးထားလို့ ရလားဆိုတော့ နိုင်ငံခြားမှာ နေတာ သေချာရင် ကိုယ်စားထုတ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ပါ အချက် ၈ ချက်လိုတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ကျောင်းသားရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ၊ ကိုယ်စားထုတ်သူရဲ့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ကျောင်းသားရဲ့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသွားကြောင်း ရပ်ကွက်မှထောက်ခံစာ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ General Power (GP) မူရင်း၊ ကိုယ်စား ထုတ်သူရဲ့ ကတိဝန်ခံချက်၊ ကျောင်းသားရဲ့ ကိုယ်စား လွှဲစာ။
“ကဲ သိပြီလား၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြိုးနီစနစ်အကြောင်း” လို့ ပြောပြီး ကိုယ်နဖူး ကိုယ်ရိုက်ရုံမှအပ ဘာမှမတတ်နိုင်။ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းထွက်လက်မှတ် နေချင်းပြီးရလာလို့ ဒီမှာလည်း ဆယ်တန်း အောင်လက်မှတ်များ နေ့ချင်းပြီး ရမလားဆိုပြီး မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ရောက်လာတဲ့ ကျနော် တခါတည်း လက်လန်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာက ဘွဲ့လက်မှတ်တွေထက် ဆယ်တန်းအောင်လက်မှတ်က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ပြောကြတဲ့အတွက် လူကိုယ်တိုင် ရောက်တုန်း ကြိုးစားကြည့်တာပါ။ အခုတော့ တက္ကစီခလည်းကုန်၊ အချိန်လည်းကုန်၊ လူလည်းစိတ်ညစ်။ ဒီလို ကြိုးနီ စနစ်ကြီးနဲ့ ကတော့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ်မှာ ဘယ်လိုမှ အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါ။
နောက်တနေ့ မနက်မှာတော့ တက္ကစီချည်း စီးနေလို့မဖြစ်ဘူး။ အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေ၊ မြို့ပတ် ရထားတွေ စီးကြည့်ဦးမှဆိုပြီး ဆင်ခြေဖုံးဒေသတခုဖြစ်တဲ့ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဆီ ခရီးထွက်လာပါတယ်။ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်အနီးရပ်ပြီး အင်းစိန်နဲ့ ရွှေပြည်သာဘက်သွားတဲ့ ဘတ်စကားတွေကို စောင့်ရင်း မြင်ခဲ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေက အထူးအဆန်းတွေပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ယာကပ်မောင်း စနစ် ကျင့်သုံးနေတာ ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် လက်ဝဲဘက်မှာ လူဆင်းတံခါးပါတဲ့ ဘတ်စ်ကားတချို့ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ တချို့ကားတွေမှာ ၀ဲဖက်က တခါးကို အသေ (ဖြစ်သလို) ပိတ်ပြီး ယာဖက်က လူဆင်းနိုင်အောင် စီစဉ်ထားပေမယ့် ၀ဲဖက်ကနေ လူဆင်းနေဆဲ ကားတစီးကိုလည်း ထူးထူးခြားခြား မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဟော … လာပါပြီ။ ရွှေပြည်သာဆီ သွားမယ့်ကား။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်ကျော် ကျောင်းသားဘ၀က စီးခဲ့ဖူးတဲ့ ဘတ်စကားထက်တောင် အခြေနေ ပိုဆိုးပါတယ်။ အဲကွန်းမရှိ။ ပန်ကာမရှိ။ ဆိုဖာခုံမရှိ။ ပြူတင်းပေါက်မှန်မှာ ဆွဲတင်စရာ ကလစ်တခြမ်းပြုတ်လျက်ရှိ။ ဒါပေမယ့် ဈေးကတော့ တက္ကစီထက် အများကြီး သက်သာပါတယ်။ တနာရီကျော် စီးရတဲ့ လှည်းတန်းနဲ့ ရွှေပြည်သာကို တယောက် ၂၀၀ ကျပ်ပဲ ကျပါတယ်။ ပူအိုက်လွန်းလို့ ကလစ်မရှိတဲ့မှန်ကို လက်နဲ့မပြီး ဟထားစဉ် မိုးရွာလာတဲ့အတွက် ဒုက္ခများခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒီကြားထဲ ကွမ်းစားပြီး ပြူတင်းပေါက်ကနေ ထွေးလိုက်သူကရှိသေး။
အင်းစိန် RIT (ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ်) ရှေ့ ကားဖြတ်သွားစဉ် ကျနော်က အထူးအဆန်းအဖြစ် ခေါင်းပြူကြည့် လိုက်ပါတယ်။ နဂိုကတည်းက နည်းနည်းဆိုးနေတဲ့ လမ်းက အင်းစိန်အလွန်မှာ ပိုဆိုးလာပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ လူဦးရေ ၆ သန်းလောက်ရှိပြီး ဘန်ကောက်မှာ ၁၂ သန်း လောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုံး ဒေသဆီသွားတဲ့ လမ်းနဲ့ ဘန်ကောက် ဆင်ခြေဖုံးဆီ သွားတဲ့လမ်းက ဘာမှမဆိုင်။ ဘတ်စ်ကားတွေကလည်း ဘာမှမဆိုင်။ ခရီးသည်တွေကလည်း မြို့ထဲကလူတွေနဲ့ ရွှေပြည်သာဖက်က လူတွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု နည်းနည်းကွာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တနာရီလောက် သည်းခံစီးပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ကျနော်ရဲ့ဆွေမျိုးတဦး နေထိုင်တဲ့ ရွှေပြည်သာမြို့စွန် ရပ်ကွက် တခုဆီ ရောက်လာပါတယ်။ သူဟာ အရင် ၁၉၈၈ ၀န်းကျင်က မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ပုသိမ်ညွန့်ဘက်က ရထားလမ်းအနီး နေထိုင်ပြီး အဲဒီကနေ ဒီကိုပြောင်းရွှေခံရတာလို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့အိမ်ပေါ် ကျနော်ရောက်သွားတော့ အရင် ရထားလမ်းဘေး ရပ်ကွက်ကအိမ်နဲ့ သိပ်မထူးခြား။ ဧည့်ခန်းမှာ ခဏထိုင်တော့ ဘုန်းကြီးနဲ့ ဒဿန ပညာရှင် တွေရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေ အများကြီးကို နံရံမှာကပ်ထားတာ သတိပြုမိပါတယ်။ “ခဏလေးနော်၊ ဂဏန်း သွားဖမ်း လိုက်ဦးမယ်” လို့ အိမ်ရှင်က ပြောပြီးထွက်သွားတော့ ဒီဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဂဏန်းရှိလို့လား ဆိုပြီး ကျနော်က မေးမိပါတယ်။
“မင်းကလည်း။ နှစ်လုံးထီကို ပြောတာလေကွာ” ဆိုတော့မှ ဒီလုို ရပ်ကွက်တွေမှာ နှစ်လုံးသမားတွေ များမှန်း သတိထားမိပါတယ်။ လမ်းကြားလေးတွေကို ကွန်ကရစ်ခင်းထားပေမယ့် အိမ်လေးတွေက ခပ်သေးသေး ပုပုလေးတွေ။
ရွှေပြည်သာက အပြန်မှာတော့ ဂိတ်ဆုံးမှတ်တိုင် ဗိုလ်တထောင် ဘုရားနားအထိ ဘတ်စကားစီးပြီး ဘုရားဝင်ဖူး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပုဇွန်တောင် ဘူတာဘက်လှည့်ပြီး မြို့ပတ်ရထား တက်စီးပါတယ်။ ဘတ်စကားစီးတုန်းက ခုံနေရာ ရသေးပေမယ့် ရထားပေါ်မှာတော့ ထိုင်ဖို့မပြောနဲ့ ရပ်ဖို့တောင် နေရာကမသေချာ။ ကင်မရာအိတ် တကားကားနဲ့ ဆိုတော့ လူကြားထဲတိုးဖို့ သိပ်မလွယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်က မြို့ပတ်ရထားထက် ဒီနေ့ ရထားက လူပိုများပြီး ပြွတ်သိပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီရထားနဲ့ အလုပ်သွားရတာ အဆင်ပြေလားဆိုပြီး ထမင်းချိုင့်ကို လက်တဖက်ကဆွဲ၊ တဖက်က လွယ်အိတ်ကို ဖိကိုင်ပြီး နံရံမှာမှီရပ်စီးနေတဲ့ လူငယ်တဦးကို မေးကြည့်မိပါတယ်။
“ကျနော့်အလုပ်က ရထားလမ်းနဲ့နီးတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ရထားခကလည်း ၁၀၀ ပဲပေးရတယ်လေ အစ်ကို။ ရထားလမ်းနဲ့ ဝေးတဲ့လူတွေတော့ ဘယ်ကိုက်မလဲ” ဆိုပြီး သူကဖြေပါတယ်။ အချိန်က ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင် ဆိုပေမယ့် ရထားထဲမှာ မှောင်မှောင်မဲမဲ။ အသက်ရှူကျပ်သလို ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ၂ ဘူတာလောက် စီးပြီးတာနဲ့ ကျနော်ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ ရထားကြီးပေါ်မှာတော့ လူတွေပြည့်ကျပ်လျက်ရှိဆဲပါ။
မြို့ထဲဖက် ပြန်တဲ့ရထားကို စီးမယ်ပြင်တော့ ဒီအချိန်မှာ အထွက်ရထားပဲ များပြီး အ၀င်ရထားက နာရီဝက်ကြာမှ တစီးရှိမယ်လို့ ဘူတာဝန်ထမ်းက ပြောပါတယ်။ အသွားနဲ့အပြန် ရထားစီးရေ ဘာကြောင့်မတူလဲ ဆိုပြီးမေးတော့ ဘာမှပြန်မပြောပါ။ အင်း … ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ တက္ကစီ ငှားရဦးမှာပေါ့လေ။ ဒီတခါ တက္ကစီက သိပ်မဆိုး။ အဲကွန်းတွေ ဘာတွေနဲ့။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်ကလမ်းတွေပဲ ဆိုးလို့လား။ တက္ကစီသမားတွေပဲ ရမ်းလို့လားတော့မသိပါ။ ရန်ကုန်က တက္ကစီပေါ်မှာ ထိုင်တဲ့အခါ ဘန်ကောက်က တက္ကစီပေါ်မှာ ထိုင်သလိုမျိုး ကွန်ပြူတာစာရိုတ်တာ၊ တယ်လီဖုန်းပြောပြီး အလုပ်လုပ်တာတွေအတွက် အဆင်မပြေပါ။
ပြီးတော့ ဘတ်စကားနဲ့ မြို့ပတ်ရထား။ ဘန်ကောက်မှာလည်း မြို့ပတ်ရထားအဟောင်း ပြေးနေဆဲဖြစ်ပေမယ့် အများစုကတော့ နောက်ဆုံးပေါ် မြေအောက်ရထားနဲ့ မိုးပျံရထားကို စီးနေကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ မြို့ပတ် ရထားလမ်းတွေ အဆင့်မြင့်အောင် ကြိုးစားဖို့ သင့်နေပါပြီ။ ဘတ်စကားလိုင်းတွေ အတွက်လည်း အဆင့်မြင့်တဲ့ ကားတွေ တင်သွင်းဖို့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ မဟာရန်ကုန် လူဦးရေ ၆ သန်းအတွက် အများသုံး Public Transport ကိစ္စကို တာဝန်ရှိသူတွေ အလေးထား စဉ်းစားသင့်နေပြီလို့ ထင်မိပါတယ်။
နောက်တနေ့ မနက်မှာတော့ ဈေးကြီးလှတဲ့ တက္ကစီကိုပဲ ထပ်ငှားပြီး သင်္ကန်းကျွန်းဘက်က ၈၈ ရုံးဆီ ပြေးရပြန်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ တာဝန်ပေးပြီး လွှတ်လိုက်တာ မဟုတ်ပေမယ့် ၈၈ မျိုးဆက်ထဲမှာ ကိုယ်လည်းတဦး ပါတယ်လို့ ကိုယ်ဖာသာ သတ်မှတ်ထားတော့ ၈၈ ငွေရတု အခမ်းအနားအတွက် ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ် ဆိုတာကို ကျနော်လည်း စိတ်ဝင်စားတာပေါ့။
ကျနော် ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ အခမ်းအနား ကျင်းပရေးအတွက် ကော်မီတီ ၁၀ ခု ကျော်ဖွဲ့ပြီး တာဝန်ခွဲနေကြပါတယ်။ တက်ရောက်လာတဲ့ လူဦးရေ ၇၀ လောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး အားလုံး အသက် ၃၅ နဲ့ ၅၅ အကြားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားတက်ကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ စာရွက်ကမ်းပေးနေတဲ့ ကလေးမလေးတဦးပဲ အသက် ၂၀ တန်းတွေ့ရပါတယ်။ ၈၈ မျိုး ဆက်အပြင် တခြား မျိုးဆက်တွေ၊ လက်ရှိ ကျောင်းတက်နေဆဲ ကျောင်းသားတွေပါ ပါလာရင် ပို မကောင်းဘူးလားလို့တော့ စဉ်းစားမိပါတယ်။
အဲဒီက အပြန်မှာတော့ ၈၈ မျိုးဆက် သတင်းစာဆရာ တချို့နဲ့ စကားစပ်မိပြီး ငွေရတုအခမ်းအနားက အမှတ်တရ အတွက် သက်သက် လုပ်မှာလား။ ၈၈ အရေးတော်ပုံအတွင်း ကျဆုံးသူတွေအတွက် ကျောက်တိုင်တွေ ဘာတွေ စိုက်ဦးမှာလား။ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်က ဘာတွေရှိလဲလို့ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကြားက လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရှိရဲ့လား။ ဟန်ချက်ညီရဲ့လား။
အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ NLD ပါတီ နဲ့ အခု ၈၈ အပါဝင် နိုင်ငံရေး
အင်အားစုတွေ၊ ကျောင်းသား အင်အားစုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေကြားမှာ အားလုံး သဘောတူထားတဲ့ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ် တခု ရှိထားရဲ့လားဆိုပြီး ကျနော်တို့ မေးခွန်းထုတ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း စစ်တပ်နဲ့ ကြံ့ဖွံ့ကို စည်းရုံးဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ ပါတီတည်ဆောက်ရေးတို့၊ မဟာမိတ် ဆက်ဆံရေးတို့၊ တပ်ပေါင်းစုတို့ဖက် အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်လို့ တယောက်က ထင်မြင်ချက် ပေးပါတယ်။
ခက်တာက သူ့မှာ အင်စတီကျုးရှင်း မရှိဘူးဗျ။ သူ မအားရင် သူ့ကိုယ်စား လုပ်ပေးမယ့်သူ၊ လုပ်ပေးမယ့် အဖွဲ့လည်းမရှိဘူး။ ခင်ဗျားတို့ အပြင်ကပြန်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီမှာအကြံပေး မလုပ်ဘဲ သမ္မတဆီ ရောက်ကုန် ကြတာကိုး ဆိုပြီး နောက်တယောက်က ကျနော့်ဘက် မျက်ခုံးပင့်ပြပြီး ဆိုပါတယ်။
“အတိုက်ခံတွေက အချင်းချင်း ကြားမှာသာ အဆက်စပ်မရှိ အားနည်းနေတာ၊ အစိုးရနဲ့ကျတော့ အားလုံးက အဆက်သွယ်ရှိနေပြန်ရော။ အားလုံးက သူတို့ Road Map နောက်ကို လိုက်နေရတာကိုးဗျ” ဆိုပြီး ကျနော်က ၀င်ထောက်တော့ အားလုံးရဲ့မျက်လုံးက ကျနော့်ဘက် လှည့်လာပါတယ်။
ရန်ကုန်ကနေ ပြန်ထွက်မယ့် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့မှာတော့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဆီသွားပြီး “မကြာခင် အမိမြေဆီ အပြီး ပြန်လာခွင့်ရပါစေ” လို့ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားပေါ်က ပြန်အဆင်းမှာတော့ မြောက်ဖက်မုခ်ဘက်ကနေ ထွက်ပြီး အာဇာနည်ကုန်းကို ၀င်အလေးပြုခဲ့ပါတယ် (http://burma.irrawaddy.org/archives/44251 )။ ဂိတ်ပေါက်ဝမှာ လက်မှတ်ရောင်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းနှစ်ဦးက လွဲပြီး ဘာလက်နက်ကိုင် အစောင့်မှမရှိ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတဦး အတွက် ၀င်ကြေး ၂၀၀ ကျပ်ယူပြီး နိုင်ငံခြားသား ဆိုရင် ၃ ဒေါ်လာယူတယ်လို့ လက်မှတ်ရောင်းဌာနနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ ကျောင်းသားဆိုရင်တော့ အခမဲ့ ၀င်ကြည့် နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်္ကျီပေါ်မှာ ကပ်ပေးလိုက်တဲ့ ၂၀၀ ကျပ်တန် လက်မှတ်နဲ့အတူ အာဇာနည်ဗိမာန်ထဲ ၀င်လာတော့ ပရိသတ်ကသိပ်မရှိ။ ၀င်လာသူ အားလုံးနီးပါးဟာ အာဇာနည် ဗိမာန်ကို ရွှေတိဂုံနောက်ခံ နဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
အာဇာနည်ဗိမာန်က ပြန်ထွက်ပြီး ရေတာရှည်လမ်းဘက် ဆင်းဖို့ပြင်တော့ သူရဲကောင်းဗိမာန်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို အပေါ်ဘက် တောင်ကုန်းပေါ်မှာ မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အရင်က ဒီနေရာမှာ ဘာတွေရှိမှန်း ကျနော် မမှတ်မိတော့ပေမယ့် အခု သူရဲကောင်းဗိမာန် ဆောက်ထားတဲ့နေရာဟာ အာဇာနည်ကုန်းထက် ပိုမြင့်ပြီး အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ “ဒီလမ်းမဟုတ်ဘူး၊ အပြင်လမ်းကသွားပါ” လို့ လက်နက် ကိုင်မထားတဲ့ စစ်သားတဦးက ကျနော့်ကို အော်ပြောပါတယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်း သွားတော့ သူရဲကောင်းဗိမာန်ဆီ မရောက်ဘဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ ဦးတည်နေပါတယ်။
“အဲဒီလမ်း မဟုတ်ဘူး၊ ကျနော်က သူရဲကောင်းဗိမာန်ကို ၀င်ကြည့်ချင်လို့ပါ” လို့ပြောတော့ အပြင်လူ ၀င်ခွင့်မရှိဘူးလို့ စစ်သားက ဆိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်မရတာလဲ ဆိုပြီး ထပ်မေးတော့ အဲဒါတော့ သူမသိဘူး၊ အပေါ်က အမိန့်အတိုင်းလို့ ဖြေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီနေရာကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရလား ဆိုတော့ ဒါလည်း မရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သူရဲကောင်း ဗိမာန်က ဘာလို့ ဖွင့်ထားသေးလဲဆိုတော့ အစောင့်စစ်သားက ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ပါ။ အခြေနေမဟန်တာနဲ့ ကျနော်လည်း လှည့်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် အာဇာနည်ကုန်းက ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို အလေးပြုသလိုမျိုး သူတို့ကို အလေးပြုဖို့ သွားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို သူရဲကောင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားသလဲ ဆိုတာကို သိချင်လို့ သက်သက် ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ ကာလအတွင်း ကျနော်တို့ သူပုန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးတဲ့ အစိုးရစစ်သားတွေ၊ စစ်ဗိုလ်တွေကို သူရဲကောင်းအဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ထားသလားဆိုတာကို ကျနော် အလွန်သိချင်နေပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ကြိုးပမ်းရင်းနဲ့ ကျဆုံးသွားလို့ အာဇာနည် ဖြစ်လာတာ သဘာဝကျပေမယ့် ပြည်တွင်းစစ်မှာ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း တိုက်ပြီး သူရဲကောင်းဖြစ်တာကတော့ သိပ်မဟုတ်သေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ အစိုးရဘက်ကနေ သူတို့စစ်သားတွေကို ဒီလို သူရဲကောင်းဗိမာန်မှာ တကူးတက မှတ်တမ်းတင် ထားမယ်ဆိုရင် သူပုန်တွေဘက်ကကော သူတို့ရဲ့ စစ်သားတွေအတွက် ဒီလိုသူရဲကောင်း ဗိမာန်ဖြစ်ဖြစ်၊အာဇာနည်ကုန်း ဖြစ်ဖြစ် တခုခု မသတ်မှတ်ထားသင့်ဘူးလား။ ကယန်းပြည်သစ်ပါတီက သူတို့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း အာဇာနည်ကုန်း တခုဆောက်ပြီး ကျဆုံးရဲဘော်တွေအတွက် ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတခုကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ABSDF အပါဝင် တခြားအဖွဲ့တွေက ဒီလိုမျိုး ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းတင်တာ၊ အာဇာနည်ကုန်း ဆောက်တာမျိုး မတွေ့ရသေးပါ။
တကယ်ဆိုရင် ဒီလိုနှစ်ဖက် တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသူတွေတင်မက ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံ၊ ၂၀၀၇ အရေးတော်ပုံတွေမှာ ကျဆုံးသွားသူတွေကိုလည်း အလားတူ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုထားသင့်တယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ၈၈ အရေးတော်ပုံအတွင်း ကျဆုံးသွားသူတွေဟာ အခု ကျနော်ရောက်နေတဲ့ သူရဲကောင်း ဗိမာန်ထဲက စစ်သည်တော်တွေထက် ပိုပြီး သူရဲကောင်းဆန်စွာ ပေးဆပ်သွားသူတွေ မဟုတ်ပါလား။ ၈ လေးလုံး ၂၅ နှစ်ပြည့် ငွေရတုအခမ်းအနားပြီးရင် ၈လေးလုံး သူရဲကောင်းဗိမာန်ဖြစ်ဖြစ်၊ အာဇာနည်ဗိမာန် ဖြစ်ဖြစ် အမြန် ပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။ ။